Mpiasa manodidina ny 3 000 isa no fantatra fa hiato amin’ny asany manomboka ny 15 Jona ho avy izao. Orinasa afakaba isany lehibe eto Antsirabe renivohitr’i Vakinankaratra ity hampiato ny mpiasa ao aminy ity, vokatry ny fihibohana noho ny valan’aretina Covid-19. Fantatra mantsy fa tsy afaka manondra sy mandray famandriahana asa avy any ivelay intsony ny orinasa ka tsy maintsy hiato, ka olona manodidina ny 700 eo ho eo sisa no hampihodina sy hanao izay asa kely mbola tsy vita, kaomandy efa nialohan’ny fihibohana. Raha ny fanazavana avy tamin’ireo mpiasa ihany dia io 15 Jona io no miato avokoa ny mpiasa rehetra aloha ka mialohan’ny fankalazana ny fetim-pirenena ny 22 jona no miverina avokoa, ary mivoaka ny lisitry ny mpiasa 700 sisa ho tazonina, ary ireo miato kosa dia homena fanomezana toy ny fanao isaky ny fetim-pirenena.
Nanao fanadihadiana mikasika ireo voka-dratsy nateraky ny fisian’ny valan’aretina Covid-19 tamina orinasa tsy miankina miisa 216 ny EDBM (Economic Development Board of Madagascar) ka fantatra tamin’izany, araka ny famelabelaran-kevitra narahina adihevitra, nentin’i Ravalomanda Andry Tiana, Tale jeneralin’ny EDBM tao amin’ny Antenimierandoholona, ny alakamisy 04 jona 2020, fa betsaka no nampiato vonjimaika ny orinasany, ao koa ireo tena nanakatona tanteraka. Amin’izao fotoana izao dia nambarany fa nidina hatrany amin’ny 91% ny «Chiffres d’affaires» an’ireo orinasa ireo, mahatratra 27% ny tahan’ny fandroahana mpiasa. Efa miisa 10 600 ireo mpiasa voaroaka tamin’ny asany amin’izao fotoana izao, raha 60% amin’ny sehatry ny lamba, tamin'ireo orinasa tsy miankina 216 nanaovana fanadihadiana. Nolazaina fa ny sehatra anabakabaka, ny fizahantany, ny ara-toeram-pisakafoana (restauration), ny fitaterana ary ny sehatry ny ara-indostria no tena tra-pahasahiranana amin’izao fotoana izao. (Jereo Sary Tohiny)
samedi, 30 mai 2020 12:46
Eoraopa: Hizotra ho any amin'ny Fiarakodia elektrika
Raha 6% amin'izao ny tahan'ny fiara mandeha amin'ny herinaratra, na batterie, dia hivoatra aingana be ho lasa 50% any Eoraopa afaka 5 taona. Manararoatra mametraka ny drafitra fanovana avokoa ireo orinasa lehibe mpanamboatra fiarakodia amin'izao krizy maneran-tany ateraky ny Covid-19 izao. Hiova arak'izany ny asa sy ny fomba fiasa, satria dia ny akora sy ny fanamboarana batterie izany no iainga, fa hihena avokoa ny resaka solika, na dia mbola tsy lefy aza izy.
samedi, 30 mai 2020 12:16
Toe-karena: Androaka mpiasa 15 000 i Renault
Manoloana ny krizy maneran-tany ateraky Covid-19 sy fanohizana ny programa fanarenana ny orinasa mpanamboatra fiarakodia Renault, dia androaka mpiasa 15 000 maneran-tany izy, ka ny 4 600 amin'izany dia ao Frantsa. Ny tanjona dia ny hitsitsiana hatrany amin'ny 2 miliara Euro any. Tombanana hihena 3.3 tapitrisa ny isan'ny fiara vokarina ao anatin'ny taona raha 4 tapitrisa izy teo aloha.
Tsy mbola hita ny marimaritra iraisana eo amin’ny tantsaha sy ny mpanangom-bokatra amin’ny vidin’ny lavanila maitso. Telo andro androany izao no nisokafan’ny taom-piotazana lavanila aty Anjiabe - Nosy Komba, tsy mbola vaky ny tsena. 240 000 Ar hoy ny mpamboly, 50 000 Ar ny an’ireo mpanangom-bokatra ny 1kg vanila maitso. (Jereo Sary Tohiny)
mercredi, 27 mai 2020 15:11
Ambalahonko- Ambanja: Rava tsy nisokatra ny tsenan’ny lavanila
Tsy raikitra fisokafan’ny tsenan’ny lavanila taty Ambalavelona sy Ambalahonko, Distrika Ambanja omaly Talata 26 may 2020. Nitaky 200 000 Ariary ny mpamboly, ny mpividy anefa tsy resy lahatra ka tsy nanoratra ny vidy ividianan’izy ireo ny kilaon’ny lavanila, ka tsy nisy marimaritra niraisina. Rava tsy nisokatra ny tsena. (Jereo Sary Tohiny)
lundi, 25 mai 2020 21:27
Ambanja: Mifamolaka ny tantsaha sy ireo mpanangom-bokatra lavanila
Tantsaha manao 300 000 Ariary ny kilao, ny mpividy mamaritra 20 000 Ariary. Mifamolaka ny tantsaha sy ireo mpanangom-bokatra tamin’ity andron’ny 25 may 2020 ity, nisokafan’ny tsenan’ny lavanila ato amin’ny faritra Sambirano Distrika Ambanja. Tao Andimaka Ankifigny Kaominina Ambohimena no ambohim-pihaonana androany, saingy nirava maina indray toy ny mpiseho saika isan-taona. Lavanila maitso na manta moa no vidiana amin'ny tantsaha, ka 5kg amin'izany manta izany no andrahoana sy karakaraina hanome 1kg lavanila azo ampiasaina sy ahondrana any ivelany.